ဝန်ဆောင်မူ စင်တာ တည်နေရာ | မြန်မာ အတွက် Huawei အကူအညီ
ပစ္စည်းလက်ခံရာ နေရာများသည် ချွတ်ယွင်းနေသော စက်များကို လက်ခံသည့် နေရာများ ဖြစ်သည်။
1. Customer Service Center: Customer Service Center isacompany that is permitted to provide repair services to all Huawei customers.
2. Collection Point: Collection Point isadesignated point for collecting customer's faulty device, and sends it to Huawei Service Center for repair.
တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖွင့်မည်လား။
ဖွင့်လိုက်သောအခါ Huawei က သင်၏ လက်ရှိ တည်နေရာကို အခြေခံပြီး အနီးအနားရှိ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါသည်။